Ra'iisul Wasaare Shirdoon: Baarlamaanka ha la Weydiiyo in Dastuurka lagu daro Xeerka Badda Soomaaliyeed ee Law No. 37
Faafin: SomaliTalk.com | June 12, 2013
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon oo uu waraysi layeeshay Telefishanka SomaliChannel ayaa xoojiyey go'aankii Golahiisa Wasiiradu ay June 6, 2013 kasoo saareen arrimaha Badda Soomaaliya. Sheegayna in xukuumaddiisu u taagan tahay danta dadka Soomaaliyeed.
Markii laweydiiyey su'aal la xiriirtay in ay qorshaynayaan ama ku tala jiraan in xeerka Badda Soomaaliya (Law no. 37 ee soo baxay 1972) - ee golaha wasiiradu ayideen - in xeerkaas lagu daro Dastuurka Qaranka Soomaaliya,waxaa ra'iisul wasaaraha DFS uu kaga jawaabay "Dastuurka wax ku daristiisa iyo wax ka dhimistiisa xukuumaddu malaha, wixii talo ah oo nagala gudboon waa ka geysanaynaa, laakiin taas Baarlamaanka in aad weydiisid ayaa ku haboon".
Markii wax laga weydiiyey in arrinta badda ee xukuumaddu ay hadda ka hadashay inuu dabasocdey saxiixii dhaxmaray labada wasiir ee Arrimaha dibadda Somaliya iyo Kenya, waxaa ra'iisul wasaaraha DFS ku jawaabay "Waxaan rajaynayaa in aad la socotid in wasiirkayaga arrimaha dibadda iyo Iskaashiga caalamiga war cad ay soo saartay oo ay leedahay arrintaas qayb kama ahayn, mana aanan saxiixin."
Su'aashii markii si kale loo weydiiye oo la yiri "Ma waxaad leedahay waa wax la been abuuray (saxiixa)", waxaa ra'iisul wasaare Shirdoon ku jawaabey "Warkii wasiiradda in aad dhagaysatey ayaan filayaa oo arrintaas ku aadanaa."
Jariidadda Standard ee kasoo baxda Nairobi caddadkeedii June 9, 2013 ayaa shaacisay saxiixa dhaxmaray labada wasiir oo qodobadii ay ku heshiiyeen ay qayb ka ahaayeen MOU iyo maritime demarcation (Xadaynta badda). Ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana waraysiga waxa uu bixiyey June 11, 2013. HOOS KA DAAWO: